I-Rivergate - istudiyo sanamhlanje kunye ne-pastel condo
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguHien
I-Rivergate, indlu entsha kraca embindini wesixeko-ekwiSithili sesi-4, iHCMC kunye nemizuzu nje emi-5 uhamba usiya kwiziko leSixeko.
Yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba ukuya kwiSithili soku-1-iZiko lesiXeko.
Uya kuyithanda ngokupheleleyo le ndawo ngenxa yendawo elungileyo, imisebenzi yangaphandle epheleleyo kunye nengaphakathi kweenkonzo zasimahla (iphuli yokuqubha, igumbi leGym, iBBQ kunye nebala lokudlala labantwana).
Ifenitshala epheleleyo yayo yonke into oyifunayo- kunye nokufikelela olomeleleyo kwi-intanethi kunye ne-TV yecabe.
Ilungele abangatshatanga, isibini kunye nosapho.
I-premium ye-5-star condo enegumbi lokuhlala, ikhitshi, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlambela. Ifestile kunye nebalcony, umgangatho ophakamileyo imbonakalo entle kwaye, umgangatho wokhuni, onamachibi angenasiphelo, igadi yesibhakabhaka, iGym, indawo yeBBQ kunye nokhuseleko lwe-24/7.
Ikufuphi kakhulu neSithili soku-1 (uwele nje ibhulorho), imizuzu nje emi-5 ukuya kwiMarike yaseBen Thanh, uNguyen Hue uhamba ngesitrato. Ukufikelela ngokulula kwezinye iZithili ezifana ne-7, 2, 8 kunye ne-3, 5... Umlambo uphambi kwesakhiwo, iipaki, kunye nesihlwele semithi. Uya kuba namava okusingqongileyo okuzolileyo kunye nokuphumla kanye embindini wesixeko sase-HO CHI MINH.
Umbuki zindwendwe ngu- Hien
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quận 4